Uhambo lwamazwe ngamazwe olungena ngaphakathi lubuyisela inyathelo elibalulekileyo kwicala elifanelekileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Uhambo lwamazwe ngamazwe olungena ngaphakathi lubuyisela inyathelo elibalulekileyo kwicala elifanelekileyo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Uhambo lwamazwe ngamazwe olungena ngaphakathi lubuyisela inyathelo elibalulekileyo kwicala elifanelekileyo.
Emva kweminyaka ephantse ibe mibini yezithintelo, ngoMvulo uqala ngokunyanisekileyo ukubuya kohambo lwamazwe ngamazwe, xa iintsapho ezihlala zahlukene kunye nabahlobo banokuphinda bahlangane ngokukhuselekileyo, abahambi banokuhlola eli lizwe limangalisayo, kwaye i-US iyakwazi ukuphinda idibanise noluntu lwehlabathi.
Umzi-mveliso wokuhamba wase-US uya kwamkela zonke iindwendwe ezigonyiweyo zamazwe ngamazwe ukuba zibuyele e-United States emva kweenyanga ezili-19 zokuthintelwa kwemida enxulumene nobhubhane ukuqala nge-8 kaNovemba.
Ukuvula kwakhona 'inyathelo elibalulekileyo kwicala elichanekileyo,' nangona izixhobo ezongezelelekileyo zomdibaniso zifuneka ukulungisa ukusilela kwe-visa.
Ngo-2019, uhambo olungena kumazwe angaphandle luvelise i-239 yeebhiliyoni zeedola kwingeniso yokuthumela ngaphandle kuqoqosho lwase-US kwaye yaxhasa ngokuthe ngqo imisebenzi ye-1.2 yezigidi zaseMelika.
Emoyeni, emhlabeni naselwandle kumazibuko okungena, nakwindawo zonke eziya kwilizwe lonke, ishishini lokuhamba lase-US liya kwamkela zonke iindwendwe zamazwe ngamazwe ezigonyiweyo ukuba zibuyele eunited States emva kweenyanga ezili-19 zokuthintelwa kwemida enxulumene nobhubhane ukuqala ngoMvulo (Novemba 8), isiganeko ekudala silindelwe esiphawula ukwakhiwa kwakhona kohambo lwamazwe ngamazwe.
Eli nyathelo linyathelo lokuqala elingundoqo ekubuyiseni urhwebo lohambo lwamazwe ngamazwe olunengeniso ephezulu. Ngo-2019, uhambo olungena kumazwe angaphandle luvelise i-239 yeebhiliyoni zeedola kwingeniso yokuthumela ngaphandle kuqoqosho lwase-US kwaye yaxhasa ngokuthe ngqo imisebenzi ye-1.2 yezigidi zaseMelika.
Emva kweminyaka ephantse ibe mibini yezithintelo, ngoMvulo uqala ngokunyanisekileyo ukubuya kohambo lwamazwe ngamazwe, xa iintsapho kunye nabahlobo abade bahlukene banokuphinda bahlangane ngokukhuselekileyo, abahambi banokuhlola eli lizwe limangalisayo, kwaye US iyakwazi ukunxulumana kwakhona noluntu lwehlabathi. Lusuku lwesikhumbuzo kubahambi, kuluntu kunye namashishini axhomekeke kutyelelo lwamazwe ngamazwe, kunye noqoqosho lwase-US ngokubanzi.
Amazwe achaphazelekayo kuhambo oluthintelweyo-okubandakanya i-United Kingdom, i-Ireland, amazwe angama-26 e-Schengen Area, uMzantsi Afrika, i-Iran, iBrazil, i-India kunye ne-China-iquka i-17% yawo onke amazwe emhlabeni jikelele kodwa ibalwa ngokungafaniyo kwe-53% kuwo wonke amazwe aphesheya. iindwendwe eziya eUnited States ngo-2019.
Imida yomhlaba kunye neCanada kunye neMexico-ezona marike zimbini ziphezulu ezingena e-US-yaye yavalwa.
Novemba 14, 2021 kwi-06: 51
Ngelixa ukuvula kwakhona imida yethu kulinyathelo elibalulekileyo kwicala elichanekileyo, umsebenzi omninzi usasele ukuqinisekisa ukuchacha kwamazwe ngamazwe. Kuya kufuneka uqhubeke nokuphepha ukuhamba okungabalulekanga kuzo zonke iindawo. Nokuba sithini na imeko yakho yogonyo: hlala unolwazi ngomsebenzi we-COVID-19.